musha nyika dzakabatana WWE Superstars Roma Inotonga Ucheche Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeWWE Superstar inonyanya kuzikanwa nezita rezita rezita “Imbwa Huru”.
Yedu yeRoma Inotonga Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri / kumashure, hupenyu hwehukama, uye akawanda OFF uye ON-Screen (zvishoma-kuzivikanwa) chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekubudirira kwake paWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveRin Reigns 'Bio iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Roma Inotonga Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Leati Joseph Anoa'i iyo inozivikanwa zvikuru inozivikanwa sekutonga kweRoma yakazvarwa pa 25th zuva raMay 1985 paPensacola muFlorida, United States.
Akazvarwa kuna amai vake, Patricia Anoa'i, uye baba vake, Sika Anoa'i, (akasiya basa wrestler).
Kukura muguta reFlorida rePensacola (inoratidzwa pazasi) inova nemahombekombe akanaka, vechidiki maReigns aive akakomberedzwa nemhuri yevarwi asi zvaishamisa kuti aisada zvekurwa mukati memakore ake ekuumba.
Hunhu hwake hwehudiki hwaive hwakanangana nezviitiko zvinosanganisira American nhabvu, Baseball, uye Ice Hockey yaive mitambo yakakurisa mutaundi rekwake.
Kutonga kwakatora chinhanho mumitambo yambotaurwa iyi pasina kudzivirirwa kubva kumhuri yake paakakwira manera ezvidzidzo.
Dzidzo yeRoma inotonga:
Anotungamira mberi kwemazuva echikoro akamuona achipinda Pensacola Katurike High School uye Escambia High School kwaakanyorera kushingaira kubatanidzwa mumakwikwi ebasa rechikoro.
Pashure pokunge apedza chikoro chesekondari, Reigns akapfuurira Georgia Institute of Technology, kwaakakwiridzira muManagement.
Munguva yegore rake repamusoro pachikoro ichi, Reigns akaridza mutsetse wekuzvidzivirira weGeorgia Tech Yellow Mabhachi kwaaive kaputeni wechikwata uye akatumidzwa kunzi-timu yekutanga -ACC muna 2006.
Hazvina kutora nguva refu Reigns asati, sehama yake 'Dombo', akasiya nhabvu (mushure mekupedza kudzidza) aine chinangwa chekuvaka basa muWrestling, mutambo mune iyo "Mhuri yaAnoa'i" izita rekufungidzira.
Kuchinja kwezvido kwaiva, pasina mubvunzo, kufamba kunofambira mberi kwakaitwa naReigns uyo, pamberi peimwe yehondo dzaaiva nadzo muguta rokumusha kwake, akayeuka basa rinokosha raakaita nenzira inotevera;
"Kukurira muPensacola, senge chero kupi zvako kuMaodzanyemba, idhorobha renhabvu rakasimba asi mutsimba yaigara iri sarudzo.
Sezvineiwo, ndakakwanisa kutamba bhora diki ndikawana bhezari. Zvose zvakandiitira”.
Roman Reigns Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Icho chinhu chinozivikanwa kuti nyeredzi zhinji dzeWWE dzinoenda mumasangano madiki uye kudzidziswa yakazvimirira kunatsiridza hunyanzvi hwavo vasati vawana kuratidzwa kukuru mukurwa asi izvo zvange zvisiri izvo zveVatongi veRoma vakasayina chibvumirano chebudiriro neWorld Wrestling Entertainment, WWE nguva pfupi mushure mekusiya nhabvu.
WWE akabva aendesa Kutonga kunharaunda yavo yekuvandudza Florida Championship Wrestling (FCW) uko kwaakatanga kuoneka sa "Roman Leakee" musi wa 9 waGunyana 2010.
Shure kwaizvozvo, akabatana nevamwe vaviri vakarwa kuti vagadzire raityisa tag timu inozivikanwa se "Iyo Shield" mu2012.
The Shield, iyo yaisanganisira Reigns, Dean Ambrose uye Seth Rollins, yakarekodha akati wandei eTag Wins vasati vaparadzana uye vakaunganazve mushure memakore matatu nehafu, muna 2017.
Nezve Galina Joelle Becker - Mukadzi weRoma anotonga:
Kutonga kweRoma ndomumwe wevashoma varwi vasina zvinyorwa zvehukama hwakakundikana, chokwadi chinosimbisa chokwadi chekuti anorarama pfungwa dzese dzezita rake remadunhurirwa. "Kukwidziridzwa".
Reigns iye zvino ane hukama hwakanaka nemusikana wake wenguva refu kana Wag akashandura mudzimai, Galina Joelle Becker.
VaDuo vakatanga sevadiwa vekukoreji mumakore avo ekufunda kuGeorgia Institute Of Technology.
Kutonga kweRoma uye Galina Joelle Becker.
Vakatora hukama hwavo nhanho mberi nekuita chibvumirano pa 26th yaFebruary 2012. Makore maviri gare gare, vakakwira chikepe che'mufaro mushure mezvo' nekuroora muna December 2014.
Roma Anotonga pikicha yemuchato. Kiredhiti Kuroora uye Kurambana.
Imba yavo inokomborerwa nemwanasikana, Joelle, akaberekwa muna 2008. Tarirai, Roma Inotonga Mwana.
Mhuri inokomborerwawo nevakomana vaviri vakaberekwa vakachengetwa vari voga kusvikira June 2016. Muduku hachizivikanwe pamusoro pemapatya panguva yekunyora iyi bio.
Kutonga kweRoma Chokwadi - Kanganiso Yechisimba:
Kunyangwe Kutonga kweRoma kuchizivikanwa kuve kurangwa, akambopomedzerwa kutyora WWE Wellness Policy mu2016, chiitiko chakatungamira WWE kumumisa iye kwemazuva makumi matatu.
Zvakakosha kucherechedza kuti hutano hweWWE hwakanaka chikamu cheConstreet wrestler chinoratidza kushanda kwekuongororwa kwezvipembenene zvinodhaka paWrestlers nechinangwa chekuchengetedza kushandiswa kwekuvaraidza nekuita zvinodhaka zvinodhaka.
Kutonga kwakanga kusiri imwe yekufananidza nonchalance pamusoro pekuvandudza sezvo akatarisa mamiriro ezvinhu nenzira yakakura uye yepamhizha kuburikidza nekukumbira ruregerero kuburikidza ne tweet yekutadza kwake.
'Ndinokumbira ruregerero kumhuri yangu, shamwari neshamwari nokuda kwechikanganiso changu mukupokana neWwe's Wellness Policy, Hapana zvikonzero. Ini ndine nhaka. '
Roma Inotonga Mafirimu Chokwadi:
Kunyange Kutonga kusingazivikanwe kuve kuri kuita mune chero chimwe chiitiko chakakura kunze kweWrestling, akambomhanyisa pfungwa yekutamba kuHollywood, pfungwa yaakafumura kuna Chuck Carroll pa 'Turnbuckle Weekly,' nekucherechedza izvozvo;
'Kana mukana iwoyo ukauya… ndakagadzirira kuedza chero chinhu uye kuwana ruzivo rwechinhu chero chipi zvacho.'
Kutonga kweRoma Chokwadi - Kuzivisa Mugshot:
Kutonga kwakambosungwa kumusha kwake munaJune 2010 nevakuru vemunharaunda vakamupomera mhosva dzakasiyana siyana dzinosanganisira kukanganisa, kuita zvisina kufanira, kudhakwa, mhirizhonga uye musangano usiri pamutemo.
Nekudaro, nhau dzekusungwa kwake hadzina kupararira kusvika 2013 apo mufananidzo wemugshot wake wakabudiswa neMugshots.com.
Kubudirira kwacho hakuna kukanganisa hukama hwake hwekushanda neWWE iyo vakawanda vaitenda kuti vakanga vasingazivi nezvekusungwa mu2010.
Roma Inotonga Hupenyu Hwega:
Kutonga ndomunhu anoratidza maitiro akaoma mumhete yekunetsana asi anorarama hupenyu hunorambidzwa. Saizvozvowo, anoenda kwenguva yakareba kuti aise kutenda kwake kweKaturike kuburikidza nokuita chiratidzo chemuchinjikwa chero nguva paanopinda muchero.
Kana ari pamusoro pesimba rake Kutonga kunogona kugadziriswa mudzidzi nokukurumidza sekupupurirwa kwaakaita zvakanaka kutamba Baseball, American Football uye Wrestling. Moreso, iye ane rudo uye anowana nguva yekukoshesa kune zvimwe zvinetso kunze kwekunetsana.
Roma Anotonga Hupenyu Hwemhuri:
Kutonga kweRoma kune midzi mune imwe yenzira huru mukurwisana kwemhuri munhau, mhuri yeAnoa'i. Tinokuudzai nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvekutonga kweRoma baba:
Baba veKutonga kweRoma, Leati Sika Anoa'i Amituana'i aive nyanzvi wrestler uyo basa rake rakapararira pakati pegore 1973 kusvika 1988 paakaenda pamudyandigere.
Leati akapinzwa muWWE Hall of Fame muna 2007 pamwe neProfessional Wrestling Hall of Fame muna 2012.
Nezve Kutonga kweRoma Amai:
Chinyanyo kuzivikanwa nezveVatongi veRoma amai Patricia A. Anoa'i. Akange akaroora kuna baba vaReigns kwemakore vasati vasiyana nezve nyaya dzemhuri.
Nezve Kutonga kwevaRoma:
Matthew Tapunu'u Anoa'i anozivikanwawo saRosey ndiye mukoma weVatongi veRoma. Aive American Professional Wrestler akasaina WWE mu2002 uye aive nebasa rakabudirira rakapfuurira kusvika 2006 paakaburitswa muchibvumirano chake cheWWE.
Akafira musi waApril 17, 2017, muPensacola, Florida, nemhaka yekubvumira mwoyo kusakundikana. Achitaura nezvekufa kwehanzvadzi yake iyo yakashamisika kumhuri Kutonga kwakaratidza kuti:
“Parizvino, ndeimwe yemamiriro ezvinhu apo paine manzwiro akasangana. Kana iwe uchigara mumhuri hombe, zvinogara zvakanaka kuti ugone kuungana pamwe chete, asi kuti uungane pamwechete kutumira hama - uye kwete chete aive hama yangu, asi mumhuri medu, kunyangwe paunenge uri hama, tese tiri padhuze zvekuti tinonzwa sehama ”
Akaratidzawo ukama hwaaiva nawo nehanzvadzi yake:
“Aive fanika wangu wekutanga. Haana kumbopotsa machisi, hapana chaakamboshaya chandakaita mhete, aigara aine mazano akanaka kwandiri uye aigara achisvika kuti nditaure ”.
Nezve Roman Reigns Cousins:
Semunhu wemhuri yeAnoa'i, Reigns ihama yemurume kune vaimbove varwi, Yokozuna, Rikishi, Umaga, The Tonga Kid pamwe neThe Rock.
Zvisinei, Dombo uye Kutonga kwevaRoma ihama dzekure nekuti sekuru vavo - Peter Maivia naAmituana Anoa'i, vaive hama dzeropa.
Kutonga kweRoma Mazita ekuremekedza:
Kutonga kune mazita emazita emazita aakawana nekufamba kwenguva. Nepo mazhinji emazita emadunhurirwa achitsanangura kugona kwake kwekurwa vamwe vachiratidza vateveri kumuona.
Mazita emadunhurirwa anosanganisira, Roman Leakee, Iyo Juggernaut, Iyo Powerhouse, Yekutanga Kirasi, Iyo Enforcer / Tsandanyama yenhovo, Joe, The Guy, Iyo Yakakwenenzverwa uye Iyo Huru Imbwa.
Roma Inotonga Hondo NeLeukemia:
Kunyangwe Iyo "Huru Imbwa" yakave neese eakarwa ake paterevhizheni kubvira paakatanga WWE munaGunyana 2009, akaita zvakanaka kubvisa izvo zvairatidza kushinga pasina kupa chiratidzo chehondo yake yakavanzika neleukemia.
Kutonga kwakatanga kuongororwa kwechirwere chekupedzisira paakange aine makore 22 zera mu2007, nguva yakaenderana nenguva yaakasiya panhabvu. Neraki, mukomana ane chinzvimbo uyo aive nehupenyu hwake pamberi pake akakwanisa kuisa chirwere mukuregererwa.
Kurumidza kutsvaga 2018 (11 makore akazotevera) baba-ve-vatatu, vakawana chirwere chacho chadzoka, uye nekuwanikwa kwave kwakazarurirwa kushamisa kune vateveri avo vasina kumbobvira vatenda kuti munhu akaoma aive nehondo dzepachivande.
“Ndinonzwa sekuti ndine chikwereti kumunhu wese kukumbira ruregerero. Kwemwedzi, ini ndabuda pano seRoman Reigns uye ndati ndichauya pano vhiki rega rega, kuti ndichave shasha yekurwira, kuti ndichave ndichienderana, kuti ndichave mushandi - asi manyepo ese nekuti chokwadi chiripo ndechekuti, zita rangu chairo ndinonzi Joe uye ndanga ndichirarama neleukemia ”
Muchiedza chakafanana, Reigns akaudza vanhu vakashamisika paMuvhuro Night Raw kuti aizotora nguva kure nechende uye aizotendera Universal Championship.
.@WWERomanReigns inofanira kurega Universal Championship nekuda kwehondo ine leukemia. #Raw pic.twitter.com/EhomllNwjK
Kunyangwe zvakadaro, Anotonga akasimba anotenda kuti haasi kuenda kumudyandigere chero nguva munguva pfupi.
"Handisi kuzonyepa, ndichatora munamato wese waungatumira, asi handisi kutsvaga kunzwirwa tsitsi, handisi kutsvaga kuti unzwe zvakaipa kwandiri nekuti ndine rutendo."
Chokwadi moyo neminamato yevakawanda iri maReigns sezvavanotarisira kuti shasha yeGrand Slam yaizodzoka kana yapedza kurova dhongi releukemia.
Kutonga kweRoma Zvimwe Chokwadi:
Akatumidzwa zita rinonzi Defensive Player wegore panguva yake kuchikoro chesekondari.
Anotonga chidhori chinopikisa ndiBret Hart.
Akanga ari iye anokunda Royal Rumble In 2015.
Siginecha yake Pfumo kufamba kwakakunda iyo 2013 "Ndeipi Kufambisa" kweMubairo wegore.
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu ROMAN REIGNS Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!